Ny fampiharana fizarana horonan-tsary sinoa Douyin dia nanamboatra ny vahaolana mazava indrindra amin'ny Intercom " NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Ny fampiharana fizarana horonan-tsary sinoa Douyin dia nanamboatra vahaolana mazava ho azy indrindra amin'ny vahaolana mahazatra indrindra
Ny fampiharana fizarana horonan-tsary sinoa Douyin dia nanamboatra vahaolana mazava ho azy indrindra amin'ny vahaolana mahazatra indrindra
Ny fanangonana fifangaroan'olom-bitsy, ny haino aman-jery sosialy ary ny vahiny mihoatra ny 500 amin'ny seha-hetsika toa ny haben'ny kianja filalaovam-baolina dia manolotra karazana fanamby tsy manam-paharoa fifandraisana. Douyin - ilay fizarana horonantsary sinoa fizarana sy media sosialy - dia nitantana tsara azy rehetra nandritra ny lanonana fanao isan-taona Blooming Night, niaraka tamin'ny fanampian'ny Clear-Com®'s HelixNet® tambajotram-pifandraisana nomerika sy rafi-pifandraisana nomerika nomerika FreeSpeak II®.
Douyin dia mitovy amin'ny Sinoa TikTok, miaraka amin'ireo rindrambaiko sosialy an'ny orinasan-dreny ByteDance. Douyin dia nanjary iray amin'ny fampiharana finday malaza indrindra sy haingana indrindra eran'izao tontolo izao, ary koa hery manankery amin'ny toekarena sinoa miteraka asa an-tapitrisany an-tapitrisany isan-taona, araka ny fanadihadiana natao farany.
Ny Blooming Night isan-taona an'ny orinasa no daty lehibe indrindra amin'ny kalandrie media sosialin'i Shina, fankalazana ny fahombiazan'ny sehatra sy ny fandraisany anjara amin'ny vondrom-piarahamonina tambajotra sosialy manerantany. Ny hetsika tamin'ity taona ity dia natao tamin'ny volana Janoary tao amin'ny Mission Hills H‧Brothers Feng Xiaogang Commune Film any Haikou, 5,000 metatra toradroa.
Mba hiantohana tsara ny fifandraisan'ny gala dia nanao hetsika mivantana i Douyin, Panda Dream Quan Cultural Development Co., Ltd (磐 德泉 化化 发展 有限公司, PDQ).
PDQ, izay manana traikefa lehibe miaraka Clear-Com teknolojia, nanamboatra rafitra iray mampifangaro ny rafitra FreeSpeak II sy HelixNet handaminana ny fifandraisana misy eo amin'ny ekipa mpamokatra hetsika mivantana sy mivantana.
"Niatrika fanamby maro izahay tamin'ny fananganana ny rafitry ny comms ho an'ity tetikasa ity," hoy i Ye Lynn, PDQMpitantana ny Tetikasa. “Ny haben'ny kianjan'ny hetsika dia ny haben'ny kianja filalaovam-baolina, ary ny sehatra dia lavitra ny faritra console. Mba handrakofana tsara an'ity faritra ity dia mila mampiasa fibre optika sy mpampisaraka transceiver izahay amin'ny fampitana azo antoka amin'ny halavirana lavitra toy izany.
Mba hiantohana ny fitoniana ny PDQ comms dia namindra transceiver 12 FreeSpeak II 2.4GHZ ho an'ny talen'ny, mpandraharaha fakantsary, mpanakanto, prop, talen'ny sehatra ary talen'ny mpanatanteraka, miaraka amin'ny vondrona tsirairay mahazo fehikibo efatra tsy voafehy FSII-BP.
Ny rafi-pifaneraserana HelixNet dia napetraka tao amin'ny tobin'ny console misy fantsona samihafa ho an'ny audio, video, jiro, vokatry manokana, laser ary mekanika mifandraika amin'ny tariby CAT6. Ny fantsona tsirairay dia nozaraina tamin'ny fehikibo HXII-BP izay "niresaka" tamim-pilaminana sy ambany latsa-bato ho an'ireo talen'ny hetsika.
Ny vanim-potoana dia nampiasa vanim-potoana roa OB, ny iray ho an'ny horonantsary 4K ary ho an'ny feo. Ny ekipa kamiao tsirairay avy dia nifandray tamin'ny ekipa mpiasan'ny rafitra FreeSpeak II sy HelixNet. Fitaovana fototra FreeSpeak II napetraka ao amin'ny 4K OB Van dia nampifandraisina tamin'ny fehikibo tsy misy tariby FSII-BP an'ny vondrona tsirairay. Ny Audio OB van dia niampy onjam-peo mpandahateny HKB-2X roa ary fehin-kibo HXII-BP iray (ho an'ny fanaraha-maso audio), mifandraika amin'i HelixNet HMS-4X ho an'ny Main Station, Control Area ary Directeur.
"Ankoatry ny fanamby amin'ny habaka midadasika toy izany dia tsy maintsy nikasa ny hisian'ny tsy fitoviana sy ny fanelingelenana amin'ny alàlan'ny fampitaovana izahay noho ny fampitaovana fampisehoana hafa," hoy i Lynn. “Toy ny mahazatra, ny Clear-Com Ny teknolojia dia nanome anay fahatokisan-tena sy fiadanan-tsaina amin'ny fahalalana fa tsy hisy olana ara-pifandraisana eo an-toerana. Ireo rafitra ireo dia miharo tsara amin'ny fitaovana tsy misy tariby nomerika an'ny mpamatsy hafa ary ny fampandehanana azy ireo dia miantoka ny fahalalahana amin'ny fanelingelenana. ny Clear-Com tsy azo soloina eto amin'ity haavo ity ny teknolojia. ”
Telstra dia miantso an'i Kris Schaffer ho mpitarika firenena kanadiana - Aprily 14, 2021
OWNZONES Manendry an'i Rick Capstraw ho Lehiben'ny mpiasan'ny karama - Aprily 8, 2021
Ny Eclipse HX Version 12.1 an'ny Clear-Com dia manome IP sy fanatsarana Wireless nohatsaraina, fampiasana streamlines 5 GHz ho an'ny FreeSpeak Edge - Aprily 8, 2021
Shina Clear-Com Douyin telefaonina TikTok 2021-04-06
Previous: Grass Valley dia manatsara ny fanitarana ny GV Media Universe miaraka amin'ny fanendrena an'i Barbara DeHart
Next: Fanavaozana ny firmware farany AtomOS 10.63 dia mamela ny firaketana ProRes RAW avy Atomos Ninja V sy Panasonic LUMIX S1